Caafimaadka Cultiva wuxuu soo bandhigayaa Mashiinka iibinta CBD • Dawooyinka Inc.eu
Cultiva Wellness waxay soo bandhigaysaa mashiinka iibinta CBD
Shirkada Cultiva Wellness LLC ee fadhigeedu yahay Miami ayaa dhowaan soo bandhigtay maqaayada 'Wellness Pantry'. A CBDMashiinka iibinta ee shirkaddu ku tilmaamtay inuu yahay nidaam horumarsan oo wax lagu qaybinayo. Caawinaad haddii aad u baahan tahay 'cbd shot' inta aad wadada ku jirto.
Taasi dabcan ma sahlana. Tikniyoolajiyadda gaarka ah ee xannibaadda ayaa xaqiijineysa da'da macaamilka. Fayo-qabka Fayo-dhawrku wuxuu taageeraa kormeerka fog iyo xakamaynta wuxuuna aqbalaa lacagaha aan lala xiriirin. Cultiva, oo sidoo kale leh barnaamij mobilo ah oo soo bandhigaya CBDbulshada, ayaa sheegay in ay si weyn u maalgelinayso samaynta hemp iyo alaabooyinka CBD ee loo heli karo suuq guud iyada oo loo marayo mashiinkeeda iibinta casriga ah.
Si Fudud Loo Heli Karo CBD
Aasaasaha shirkadda iyo u doodaha xashiishka Daniel Torres ayaa sheegay in ujeedada Cultiva Wellness ay tahay in la sameeyo waxyaabaha ugu fiican ee hemp iyo alaabada CBD ee ay si fudud u heli karaan dad badan intii suurtagal ah iyadoo la adeegsanayo xalka tiknoolajiyada. Shirkaddu waxay ku bilaabatay 2019 iyada oo ah jumladle iibiya iyo qaybiye. Bakhaarkii ugu horreeyay ee Fayoqabka ayaa lagu rakibay magaalada Doral, FL.
Akhri wax dheeraad ah vendingmarketwatch..com (Source, EN)
CBD waxay daweyn kartaa caabuq uu sababo COVID-19, ayaa leh daraasadda
Baarayaasha waxay ogaadeen in CBD ay yareyneyso caabuqa sanbabada ee moodooyinka mooska COVID-19 ...
Waa maxay CBG maxaase loo adeegsadaa?
Cannabigerol, ama CBG, waa a non-psychoactive cannabinoid caadi ahaan ugu badan ee noocyada cannabis leh ...
Daraasad cusub oo ka socota Danmark ayaa heshay xiriir sii kordhaya oo u dhexeeya dhibaatada, isticmaalka xashiishadda xad -dhaafka ah iyo kiisaska…